Uyisebenzisa njani iPinterest yeShishini ngempumelelo? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayisebenzisa njani iPinterest yeshishini ngempumelelo?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 316
Kulabo bazinikele kwintengiso kwiPinterest, yazi ukuba iakhawunti yeshishini yoku Isicelo sikunika izibonelelo ezinkulu kwinqanaba lokuthengisaUmbuzo ngowokuba bayayazi na indlela yokwenza okungcono ngayo.Ukulawula iakhawunti yorhwebo kubuthathaka ngandlela ithile, kuba olu lawulo yinto engakhokelela kwimpumelelo okanye ekusileleni kwenkampani ebandakanyekayo kwinkqubo.
Ezinye iingcebiso zezithuba:
Beka apho kufanele ukuba babe khona:
Kubalulekile ukuba ngalo lonke ixesha upapasha ipini, yibeke kwindawo elungileyo, Ngale ndlela umthengi uya kuba nakho ukuyifumana ngokulula ngakumbi, khumbula ukuba kwihlabathi lanamhlanje sinexesha elincinci yonke imihla, ixesha liguqulela kwimali kubantu abaninzi.
Nangona kukho iintlobo ngeentlobo zeemveliso kwintengiso, Kufuneka kusoloko kukho ukungqinelana ngaphakathi kwinkampaniOku kuthetha ukuba, ukuba kuyacetyiswa ukuba ube neemveliso ezintsha, kodwa kuya kufuneka ugcine ezona mveliso zinempumelelo, ke kuyacetyiswa ukudibanisa ushicilelo uphinde upapashe ezinye ezindala ebeziphumelele.
Izifundo ezininzi ziye zafakazelwa elona xesha lixakekileyo Kwiwebhu kuphakathi ko-5 emva kwemini neli-9 ebusuku, kuphakathi kweli xesha ekucetyiswa kakhulu ngalo ukuba upapashe izikhonkwane ezitsha, lixesha apho abantu bephumla kwaye bathathe ithutyana ukuziphazamisa.
Le yenye yezicelo ezinikezela ezona zixhobo zokuthenga kubasebenzisi bayo, oko kukuthi, awungekhe upapashe izikhonkwane kuphela, unokushicilela amakhonkco ahambelana nezikhonkwane eziphambukayo kumthengi kwiwebhusayithi yenkampani, Amaqhosha okuthenga, avumela umthengi ukuba athelekise ngokulula.
Kwaye ezi zimbini kuphela izixhobo ezinikezelwa sisicelo, wena Ndikucebisa ukuba ubazi kwaye wazi indlela yokuyisebenzisa ngeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana eyona nzuzo yezoqoqosho kwinkampani yakho.
Imifanekiso yileta yakho yokugubungela kunye nesixhobo sokutsala abathengi abanokubakho, ndincoma ukuba uyisebenzise ukuze uncede, unganeli nje ukubenza banomdla ubungakanani kule meko ibalulekile kakhulu. Okona kucetyiswayo kukuba imifanekiso inesayizi ephakathi, edibeneyo kwaye ilungele indawo nganye eya kubekwa kuyo kwiphepha.
Kukho ubukhulu obucetyiswayo Isithuba ngasinye eqongeni kunye nenkqubo yaso iya kuzicebisa kuwe njengoko uzilayisha eqongeni.
Le yinto abathengi bayayiqaphela, kaninzi kangakanani ukwenza ipini yokuthumela kunye nokuphinda uphendule, Into yokuba ubukho bakho ibonwe ngaphakathi kweqonga iya kubonisa abathengi kunye nabathengi abanomdla ukuba unomdla kwishishini lakho, ukuba unomdla kwinto eyenzekileyo ngayo kunye neendlela zomnatha.
1 Ezinye iingcebiso zezithuba:
2 Izikhonkwane ezidibeneyo:
4 Ifomathi yomfanekiso:
Uyipapasha njani iPinterest ngokufanelekileyo?
Ngaba izibalo zePinterest ziyanceda ngokwenene?